Ahoana ny fanesorana ny mari-drano amin'ny sary ao amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Ny mari-drano dia ampiasaina hanasoniavana sary, miaro ny zon'ny mpamorona anao izy io, manakana ny hafa tsy hampiasa azy ireo raha tsy mahazo alalana aminao. Fa marina fa indraindray isika dia mitahiry ilay sary miaraka amin'ilay mari-drano ary very ilay kinova voalohany. Soa ihany, Misy fomba fanesorana ny mari-drano amin'ny sary amin'ny Photoshop Tohizo ny famakiana ilay lahatsoratra mba hianaranao ny fomba fanaovana azy tsikelikely!
1 Sokafy ny sary ary tadiavo ny fitaovana plug clone
2 Fitaovana plug clone
3 Torohevitra hanatsarana ny valiny rehefa esorina ny watermark amin'ilay sary
3.1 Clone soa aman-tsara
3.2 Milalaova amin'ny haben'ny borosy
3.3 Tandremo ny sisiny sy ny vala
Sokafy ny sary ary tadiavo ny fitaovana plug clone
Ny zavatra voalohany hataontsika dia sokafy ao amin'ny Photoshop ny sary Fantatrao fa afaka manokatra azy io ianao amin'ny alàlan'ny fisintonana azy fotsiny. Manaraka, ao amin'ny baraovana dia tadiavo ny plug clone (amin'ny sary etsy ambony no nanamarihanao azy).
Fitaovana plug clone
Con fitaovana plug clone ianao no miteny Photoshop izay ampahany amin'ilay sary tianao hamboarina ho "copie". Fanindriana ny manan-danja safidy, raha miara-miasa amin'ny Mac ianao, o ny zava-drehetra, raha miasa miaraka amin'ny Windows ianao dia hisafidy izahay faritra aiza amin'ny sary no tokony hamboarantsika. Mbola haverinay io dingana io, ary handoko ny marika izahay rano mandra-panjavonany.
Torohevitra hanatsarana ny valiny rehefa esorina ny watermark amin'ilay sary
Clone soa aman-tsara
Mba hahazoana ny vokatra azo trandrahana tsara indrindra dia zava-dehibe ny fampisehoana be anao. Izany hoe rehefa cloning dia raisinao andinin-tsoratra izay mitovy amin'ny azo atao amin'ny resaka loko sy loko mankamin'ny faritra anaovanao sary. Tsy mitovy ny manao an'io amin'ny alàlan'ny santionany amin'ny faritra maizin'ny lanitra, fa tsy amin'ny faritra akaiky kokoa ny fari-drano, miaraka amin'ny tonony mitovy amin'izany. Hahatonga azy io ho zava-misy kokoa ho anao.
Milalaova amin'ny haben'ny borosy
Ambony, Ao amin'ny baran'ny safidy fitaovana, azonao atao ny manova ny endrika, habe ary karazana borosy, Matetika aho no misafidy ilay boribory miely mba hahafahako rehefa manarona azy dia malama. Fa afaka manova azy ianao.
Mora ny mamafa ny ampahany amin'ny lanitra, afaka fotoana fohy, satria faritra be fisaka io, tsy misy pitsopitsony kely. Na izany aza, miezaha ho tsara sy handoko tsara mba tsy hisy ratra sy marika hafahafa. Amin'ny borosy kely dia tsara kokoa matetika.
Tandremo ny sisiny sy ny vala
Ho sarotra kokoa ny manamboatra ny sisin'ny sisiny na ohatra ny faritra misy ny ketrona na mivalona amin'ny akanjo. Ny tendroniko dia manitatra betsaka, betsaka, ary mampihena ny haben'ny borosy, alao tsara, manarona. Azonao atao koa ny mandeha pixel amin'ny pixel. Miadana sy miasa izy io, fa ny vokany dia ho tsara lavitra noho ny raha ataonao amin'ny borosy matevina sy avy lavitra. Ilaina ny mandany fotoana amin'izany.
Ity no vokatra farany. Raha te hianatra ianao mamorona mari-drano anao manokana ao amin'ny Adobe Photoshop Manoro hevitra anao aho hamaky ny lahatsoratra avelako hifandray aminao eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny fanesorana mari-drano amin'ny sary ao amin'ny Photoshop